Aberdeen, perla any Ekosy | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | Aberdeen, Inona no ho hita
Rehefa vonona ny handeha ho any UK ianao, imbetsaka ianao dia tsy te hijanona irery any London. Ny hevitra dia ny manararaotra sy mivezivezy. Ny kilao dia lafo kokoa noho ny euro ka afaka mamono vorona maro amin'ny vato iray ianao amin'ny dia iray.
Rehefa mahita ny sari-tany ianao dia hipetraka amin'ny fotoana sasany ny masonao Scotland. Edimurgo no toerana mahazatra indrindra fa raha manandratra ny masonao ianao, manatrika ny avaratra mangatsiaka dia hanavaka ianao Aberdeen. Io no tanàna fahatelo be mponina indrindra amin'ny firenena ary fantatra amin'ny anarana hoe Tanànan'ny Granite. Fantaro ny antony.
1 Aberdeen, toerana any Ekosy
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any Aberdeen
3 Inona no ho hita any Aberdeen
Aberdeen, toerana any Ekosy
Raha tianao ny tantara Scottish na efa noroahina Fo sahyOhatra, tsy afaka manadino an'i Aberdeen ianao. Nandritra ny Ady ho an'ny Fahaleovantena Scottish dia teo ambany fifehezan'ny Anglisy ary ilay malaza Robert de Bruce no niseho tamin'ny antsasaky ny horonantsary ho mpamadika an'i Wallace izay nanao fahirano lehibe, handrava azy tanteraka tamin'ny 1308, hamono ny anglisy rehetra ary hamerina izany any Skoto.
Aberdeen tsy nanana izay nolazaina tamin'ny fiainana mangina, eo anelanelan'ny tranonkala, ny ady ary ny loza mahatsiravina izay nanimba ny isan'ny mponina, ny fatiantoka sy ny fanamboarana azy. Androany izy dia mampiseho ny tenany ho tafita velona. Eo anelanelan'ny vavan'ny renirano roa no itoerany, ny Don sy ny Dee, ary ireo havoana mihodinkodina maromaro. Manao ahoana ny toetranao? Jereo fotsiny ny sari-tany hahafantarana izany masiaka ny ririnina, miaraka amin'ny masoandro vitsivitsy be.
Mitandrema amin'ny volana Desambra satria io volana io dia namaky firaketana ny fanala tamin'ny -16ºC tamin'ny 2010. ¿Ny fahavaratra no safidy tsara indrindra? Mazava ho azy fa mihoatra ny 20ºC ny mari-pana ary amin'ny fahavaratra mafana dia hahatratra 30ºC izy ireo. Tsy ratsy ho an'i Aberdeen lavitra.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Aberdeen
Nifandray tsara tamin'izao tontolo izao i Aberdeen: manana seranam-piaramanidina iraisampirenena, gara, gara ary gara. Amin'ny fiara dia ao anatin'ny adiny roa sy sasany fotsiny ianao avy any Edinburgh na Glasgow.
Avy any Londres ianao dia afaka mandray serivisy serivisy avy amin'ny Virgin East Coast izay miainga avy amin'ny King Cross Station ary maharitra adiny fito sy telovolana eo ho eo. Miala isaky ny adiny efatra ny lamasinina. Misy serivisy haingam-pandeha fa tsy maintsy manao fifandraisana any Edinburgh (Edinburgh Haymarket Station) ianao. Tamin'ny taon-dasa dia manodidina ny 80 kilao ny tahan'ity serivisy ity.
Avy any Londres safidy iray hafa dia ny Caledonian Sleeper izay miainga avy any London Euston amin'ny 9:15 hariva ary tonga ao Aberdeen tokony ho tamin'ny 7 ora sy sasany maraina. Tsy ratsy mihintsy ary ho an'ny kabine misy bunk nozaraina dia mandoa £ 30 ianao. Tokony ho tadidinao fa ny tahan'ny mety indrindra dia hita foana rehefa manoratra sy mandoa mialoha ianao. Ny tapakila mandeha an-dalambe dia mora ihany koa mazàna, ka tadidio izany.
Misy ihany koa ny tolotra ho an'ny Kilasy Voalohany ka tadiavo izy ireo satria rahateo tsy fohy ny dia, raiso izay lamasinina alehanao.
Mikasika ireo zotra Amin'ny fiara fitateram-bahoaka avy any Londres ny dia maharitra 12 ka hatramin'ny 13 ora. Miala avy ao amin'ny gara Victoria Coach Station in-droa isan'andro ny maraina ary ny hariva. Manana bus ianao amin'ny 8 maraina, ohatra, ary serivisy amin'ny alina amin'ny 10:30 alina. Amin'ity tranga ity dia maharitra roa ora latsaka ny dia, mihoatra na latsaka. Tamin'ny taon-dasa dia nanomboka 20 kilao ny salan'isa. Mazava ho azy fa afaka mividy tapakila an-tserasera amin'ny tranokalan'ny National Express Coach ianao.
Raha te-hitondra fiara ianao dia afaka manofa fiara ary manao ny dia irery. Misy làlambe maromaro mampitohy an'i Londres mankany Aberdeen na Edinburgh mankany Aberdeen. Ahoana anefa raha efa any Ekosy ianao? Avy any Glasgow sy Edinburgh dia afaka mandeha any ianao amin'ny lamasininaAvy any Newcastle sy avy any York ihany koa. Jereo ny serivisy an'ny Scotrail.
Araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, i Aberdeen dia manana terminal ferry miorina eo Jamiesen's Quay eo anoloan'ny gara.
Inona no ho hita any Aberdeen
Tokony holazainao aloha izany I Aberdeenshire, ny distrika, dia fantatra amin'ny faritry ny Scottish Castle County Ary izany dia satria ity ampahany ity dia mifantoka amin'ny avo indrindra amin'ny lapa medieval isaky ny acre ao amin'ny UK manontolo. Noho izany, mifantina tsara izay tsy tianao halaina! Afaka misoratra anarana amin'ny Làlana tokana natokana ho an'i Sctoland misy trano mimanda 18, ao anatin'izany ny Castle Balmoral, Castle Crathes, Castle Drum, Castle Dunnator na ny Huntly.
El Castle Balmoral Io no Royal Residence rehefa mandehandeha na miala sasatra any Ekosy i Queen Elizabeth II. Nanomboka tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-2017 ary azon'ny satro-boninahitra teo ambanin'ny fitondran'i Victoria. Amin'ity taona 1 ity ny zaridaina, ny trano fisakafoanana, ny efitrano fampirantiana ary ny fivarotana dia hisokatra amin'ny fialantsasatra ihany koa eo anelanelan'ny 31 aprily sy 10 jolay, manomboka amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny XNUMX hariva.
Ny fidirana dia £ 11 ary misy fijanonana, fidirana amin'ny zaridaina sy zaridaina, ny sehatry ny fampiratiana ao amin'ny tranon'omby ary ny Banquet Hall an'ny trano mimanda. Ahitana torolàlana am-peo koa ao. Adiny iray mahery monja avy eo Aberdeen ary azon'ny taxi na bus. Na amin'ny fitsangatsanganana, mazava ho azy.
Ankoatry ny Balmoral, inona ny trano mimanda hafa atoro anao? ny Castle Crathes Izany dia trano mimanda tena kilasika, voahodidina zaridaina mahafinaritra. Ao anatiny no misy fanaka fahagola, mpihazona ny sarin'ny fianakaviana ary tantara maro. Manomboka amin'ny 10:30 maraina ka hatramin'ny 5 hariva ary vidin'ny £ 12 ny fidirana. ny Drum Castle Fito ambin'ny folo taonany izao ary ny tilikambo sy ala dia nomena ny fianakavian'i Robert de Bruce tamin'ny 1323.
Androany dia manana sehatra Jacobite sy Victorian izy, taty aoriana, ary zaridaina rosianina tsara tarehy nambolena teo anelanelan'ny taonjato fahafito ambin'ny folo sy roapolo. Manokatra ny varavarany amin'ny 11ora maraina izy ary mitentina £ 12.
Araka ny nolazaiko fa maro ny trano mimanda ka tsy maintsy mifidy izay tianao hotsidihina fotsiny ianao ary hanao fitsidihana. Indraindray dia tsara kokoa ny misoratra anarana amin'ny fitsidihana na maromaro, mba tsy hanadino ireo zava-dehibe indrindra. Etsy ankilany, Fantatra amin'ny whisky i Scotland. Ny kalitaon'ny rano eo an-toerana, ny vokatry ny orza ary ny rivotra no mahatonga ny kalitaon'io fanahy io hahagaga. Mba hahitana whisky Scotch dia azonao atao ny Ny miafina miafina any Aberdeenshire.
Ny fitsangatsanganana dia mitondra anao amin'ny alàlan'ny distilleries maromaro nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX, hita any amin'ireo tanàna tsara tarehy toa an'i GlenDronach, Ardmore na i Fettercairn. Ireo fitsangatsanganana ireo dia miainga amin'ny fotony ka hatramin'ny manam-pahaizana manokana, ny tsara indrindra rehefa mpidoroka whisky ianao. Ny ankamaroan'ny distilleries Scottish dia mitazona ireo teknika fanadiovana taloha ary mamela anao hahita ny fizotrany ka tsara izany. Anisan'ireo distiller malaza indrindra ny an'ny Glenfiddich, Chivas Regal, McCallan ary The Glenlivet.
Farany fa tsy ny kely indrindra dia ny firafitry ny tanànan'ny Aberdeen: manana foibe manan-tantara roa, ny Aberdeen taloha miaraka amin'ireo araben'akanjony sy katedraly taonjato faha-XNUMX natanjaka, ary ny Footdee, distrika fanjonoana miorina eo amoron'ny morontsiraka misy trano kely, zaridaina voninkazo ary trano maro loko. Afaka mandeha amin'ny làlambe ianao, ny Union Street, làlana izay feno trano miorina amin'ny granita fotsy (avy eo ny anaran'i Granite City), mandeha eny amoron-dranomasina na manao tabilao raha tsara ny andro.
ny morontsiraka fasika volamena mivelatra kilometatra maro, misy aza dongona maro, hatrany avaratra hatrany, fa ny atsimo kosa no misondrotra sy mahafinaritra hantsam-bato. Ary farany, ny sary miaraka amin'ny Sarivongana William Wallace tsy mety tsy hita ao amin'ny bokin-tsorinao. Hitanao eo amin'ny fiarahan'ny Rosemount Viaduct sy Union Terrace izany. Misy koa iray hafa nataon'i Robert Burns, mpanoratra Scottish malaza, ary iray hafa nataon'i Robert de Bruce ao amin'ny Broad Street.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Aberdeen » Aberdeen, perla any Ekosy